သင့် Blog ကိုမည်သူမျှဂရုမစိုက်! | Martech Zone
သင့် Blog ကိုဘယ်သူမှဂရုမစိုက်ဘူး!
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မတ်လ 14, 2007 ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 18, 2015 Douglas Karr
နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်နှင့်ပတ်သက်သောတိတ်ဆိတ်စွာနေရသည်။ ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါဘူး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငါထင်တာက "ဘလော့ဂါတစ်ယောက်၊ မင်းနားမလည်ဘူး"
အမှန်တရားကတော့ငါဟာဘလော့ဂါမဟုတ်သူတွေထက်ငါဘလော့ဂါတွေကိုပိုပြီးလေးစားတယ်။ (ငါက 'လေးစားမှု' လို့ပြောတယ်သတိပြုပါ။ ဘလော့ဂါမဟုတ်တဲ့သူတွေကိုလေးစားမှုမရှိဘူးလို့ငါမပြောခဲ့ဘူး။ )
ဒါကြောင့်မင်းကငါ့ကိုပြုံးပြီးငါ့ဘလော့ဂ်ကိုရယ်နိုင်တယ်။ ငါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်နည်းပညာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုနှစ်သက်တယ်။ ငါသင်ယူခဲ့တာတွေအကြောင်း Blogging ကိုနှစ်သက်တယ်။ တစ်စုံတစ် ဦး ၏ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပေးသောသတင်းအချက်အလက်လေးကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေသောအခါသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်ပေးပို့သောအခါကျွန်ုပ်သည်ဗဟုသုတနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုမရှာဖွေနိုင်ပါ။
သူတို့ရဲ့လက်မှုပညာကိုမနှစ်သက်တဲ့လူတွေကိုငါစိတ်ပူတယ်။ 5PM ထိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ထိုသူများသည်ညှိ။ ပိတ်၊ အိမ်သို့ပြန်သွားကြသည်။ ကမ္ဘာကြီးကသူတို့ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပြောင်းလဲနေတယ်၊ ​​အပြိုင်အဆိုင်အရှိန်မြှင့်လာတယ်၊ နည်းပညာအသစ်တွေကမ္ဘာပေါ်မှာဖွင့်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်မ ၀ င်စားဘူး။ အိမ်ကိုမြေပေါ်တွင်းတွင်းတူးနေသလိုပဲသူတို့တစ်ယောက်ယောက်ကဂေါ်ပြားကိုယူသွားတယ်။ သိချင်စိတ်နှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုမီးခလုတ်ကဲ့သို့သင်မည်သို့ပိတ်နိုင်မည်နည်း။
စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဦး ဆောင်မှု၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဂရပ်ဖစ်၊ သုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်း၊ အသုံးဝင်မှုရှိခြင်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း - ဤအရာများသည်အောင်မြင်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်သင်ယူရန်လိုအပ်သည့်အလုပ်များဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏လက်မှုပညာသို့မဟုတ်သင်၏စက်မှုလုပ်ငန်းကိုစိတ်မ ၀ င်စားပါကသင်၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းအလုပ်တစ်ခုမရှိတော့ပါ။ ငါအလုပ်ရှိလူများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ချင်ကြဘူး။ ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲချင်တဲ့လူတွေနဲ့ငါအလုပ်လုပ်ချင်တယ်။
ဦး ဆောင်မှုကိုနှစ်သက်သောခေါင်းဆောင်များသည်သူတို့၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ အိမ်နှင့်မိသားစုတို့အားလည်း ဦး ဆောင်ကြောင်းသတိပြုမိသည်။ သူတို့၏လက်ရာများကိုနှစ်သက်သော developer များကအားလပ်ချိန်များတွင်ဖြေရှင်းနည်းများကိုတီထွင်ကြသည်။ ဂရပ်ဖစ်အနုပညာရှင်တွေဟာစိတ်ကူးယဉ်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေတည်ဆောက်ပြီးအလွတ်တန်းအလုပ်ကိုလုပ်တယ်။ User Interface ဒီဇိုင်နာများသည် applications များနှင့်နောက်ဆုံးထုတ်စာပေများကိုဖတ်ရှုနေကြသည်။ အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်ကျွမ်းကျင်သူများသည်နောက်ဆုံးပေါ်သိပ္ပံနည်းကျရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များကိုအမြဲတမ်းဖတ်ရှုလေ့လာနေကြသည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်သူတို့၏မိတ်ဆွေများကိုသူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ကူညီပေးလေ့ရှိသည်။ ဒီလူတွေအတွက်အလုပ်မဟုတ်ဘူး၊ သူတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ဘဝပါပဲ။
၎င်းသည်မိသားစုသို့မဟုတ်ပျော်ရွှင်မှုမှကင်းဝေးသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဒီလူတွေကသူတို့လိုချင်တာတွေအားလုံးရှိတယ်၊ ငါဘလော့ဂ်များကိုဖတ်ရှုသောအခါဤဘလော့ဂါများသည်သူတို့၏လက်မှုပညာ၌ထားရှိသောကျွန်ုပ်၏လေးစားမှုကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ငါသဘောမတူနိုင်တယ် သူတို့ကိုငါလေးစားတယ်
ဒီနေ့ငါထံမှစာတစ်စောင်လက်ခံရရှိခဲ့သည် မာကုကျူးဘား ငါသည်သူ၏ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့မှတ်ချက်တစ်ခုတုံ့ပြန်မှုအတွက်။ ၎င်းသည်တိုတောင်းလှပြီးသူ၏ site ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တင်ခဲ့သောမှတ်ချက်အပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဒီလူကိုငါမုန်းချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူ့ post တွေကိုငါမကြည့်နိုင်ဘူး။ သူဟာရန်လိုတတ်တယ်၊ တင့်တယ်တယ်၊ ငါသူပြောသမျှကိုငါသဘောမတူဘူး။ သို့သော်လည်းငါသည်သူ၏စိတ်အားထက်သန်မှုကိုနှစ်သက်ပြီးထိုသို့သောသူနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းသည်မယုံနိုင်စရာဖြစ်လိမ့်မည်။
ကောင်းပြီဒenoughနိကဗေဒ ... ဒီဟာကိုပျော်ရွှင်တဲ့မှတ်စုတစ်ခုနဲ့အဆုံးသတ်ရအောင်။ အကယ်လို့ငါတီရှပ်ဒီဇိုင်းဆွဲမယ်ဆိုရင်၊
သင်၏ Corporate Blogging Strategies ကိုမြှင့်တင်ရန်အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်များ
မတ်လ 14, 2007 မှာ 10: 39 pm တွင်
ကောင်းပြီ ကျွန်ုပ်သည်အလုပ်ဖွင့်ရန်လျှောက်လွှာများကိုစုဆောင်းနေရပြီးကျွန်ုပ်မေးမြန်းခဲ့သည့်ပထမမေးခွန်းတစ်ခုမှာ“ ဒီလူမှာဘလော့ဂ်ဒါမှမဟုတ် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ရှိသလား” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မရှိသောသူများအထက်တွင်ရပ်တည်သောအရာများကိုစိတ်အားထက်သန်မှုပြသသောသူတို့သည်။
မတ်လ 14, 2007 မှာ 11: 01 pm တွင်
အချို့လူများနားမလည်ကြသော်လည်းရှပ်အင်္ကျီကဤသို့ဖော်ပြပါကရယ်စရာကောင်းလိမ့်မည် - -Apple Logo ဒီမှာ - + Blog! = Girlfriend ။ 🙂
မတ်လ 15, 2007 မှာ 12: 47 pm တွင်
မတ်လ 15, 2007 မှာ 9: 22 AM
မတ်လ 15, 2007 မှာ 9: 21 AM
Great post ။ မင်းပြောသမျှကိုငါသဘောမတူဘူး ယခုတွင်ငါသည်ငါ့အလုပ်မှထွက်ရန်လိုအပ်သည်။
Sterling "Chip" ကန်ဒန်း
မတ်လ 15, 2007 မှာ 1: 36 pm တွင်
တစ်ခါတစ်ရံတွင်အသိဉာဏ်ရှိပြီးစိတ်အားထက်သန်သူဟုထင်ရသူများပင် blogging မလုပ်နိုင်ပါ။ အလင်းကိုမြင်ရဖို့ကျွန်မစိတ်ရှည်ရှည်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။
မတ်လ 15, 2007 မှာ 9: 19 pm တွင်
မတ်လ 16, 2007 မှာ 2: 15 AM
မင်းရဲ့အတွေးအခေါ်နဲ့တီရှပ်လုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ (မင်းက cafepress နဲ့ spreadshirt ကိုသုံးနိုင်တယ်။ )
အချိန်ပြည့်ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ဖြစ်လာမည့်၊ အကြောင်းအရာအားလုံးကို wordpress သို့ရွေ့လျား…
မတ်လ 16, 2007 မှာ 7: 08 AM
ခမ်းနားလေးစားမှု ၂ ဦး ။ ငါ ur blog ကိုဖတ်တယ် .. :-)
မတ်လ 17, 2007 မှာ 7: 48 AM
မတ်လ 17, 2007 မှာ 9: 30 AM
မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်စိတ်ကူးယဉ်ပြောင်းလဲနေသောနည်းပညာဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်ကခေါ်သွားလဲကြည့်ဖို့မစောင့်နိုင်ဘူး။